Muuqaalka Dhismayaasha Xuruufta Laatiiniga A Ilaa Z- Nashqadoodu U Dhisan Tahay | Hawraar
Muuqaalka Dhismayaasha Xuruufta Laatiiniga A Ilaa Z- Nashqadoodu U Dhisan Tahay
Shabakada Google ayaa soo bandhigtay muuqaal dhawr iyo labaatan dhisme oo sida xuruufta laatiniiga ah u dhisan, kuwaas oo ka bilaabmaya Xarafka ‘A’ ilaa Z’, waxaanay dhismayaashan badankoodu ku yaalan dalka Maraykanka gaar ahaan magaalada New York.
Sida Google sheegtay ogaanshaha dhismayaashani may ahayn mid markii hore qorshaha ku jiray, laakiin waxa si lama filaan ah ula kulmay, mid ka mid ah, khubarada u qaabilsan qaybta khariirada ee dayax gacmeedka loo adeegsado, kaas oo wakhti uu dusha ka eegayay magaalada New York isha qac ku siiyay dhisme Muuqaalkiisa kore u dhisan yahay sida xarafka ‘A’, kaas oo marka dusha laga eego sidaa u muuqaal ekaanaya.
In yar ka dib markii uu sii dhaqaajiyay khariirada ayuu haddana arkay mar kale dhisme aan ka fogayn oo isaga laftiisu marka dusha laga soo eego samayanaya Muuqaalka xarafka ‘B’ ee farta laatiiniga, waxaanay taasi ku dhalisay khabiirkan inuu baadhitaanka sii wado, ilaa uu ka gaadhay inuu isku keeno dhismayaal tiro badan oo dhamaystiray dhamaan xuruufta laatiinigu inta kalmadood ee ay ka kooban tahay.
Maaha dhismayaashani kuwo sida muuqata dadkii dhisayay ay u diyaariyeen inay ku koobaan xuruufta luuqada Laatiiniga, sababtoo ah? Waxa la ogaan lahaa wakhtiyo hore, laakiin waxa muuqata in sababo jira awgeed ay injineeradii dhisay u door bideen in qaabkooda marka dusha sare laga taagan yahay mid walba xafar uu jeclaystay u muuqaal ekaado, taas oo loo malaynayo habka kaliya ee injineerada Maraykanku u doorteen inay nashqad ahaan qaabkan oo kale u dhigaan.
Waxa kale oo suura gal noqon karta sida Google xustay in injineeradii dhisay xarfahan u doorteen, si ay ugu muujiyaan magacyadooda, oo tusaale ahaan mid xarafka A, Magaciisu ka bilaabmo midna B, noqon karo mid kalana xaraf kale doorto, laakiin markii tignoolajiyada casriga ahi soo baxday ee si wanaagsan dusha sare looga arkay uun la ogaaday.